बिज्ञानको अधिकतम प्रयोगले मानिशलाई शारिरिक रुपमा कमजोर बनाउँदै लगेकाले आयुर्वेद र योगमा आकर्षण बढ्यो : गंगा ढकाल – सप्तरंगी एफ एम
भेरी नदीमा यात्रुबाहक बस खस्दा चार जनाको मृत्यु
१ बर्ष भित्र निर्माण गरिसक्ने भन्दै शिलान्यास गरिएको दमकको रोज गार्डेन पार्कमा १ बर्ष पुग्दा शिलान्यासमा रोपिएकै गुलाफका बिरुवा वेपत्ता
इलामको देउमाईमा ट्रयाक्टर दुर्घटना , एकको मृत्यु दुई घाईते
मुख्यमन्त्री शेरधन राई निजि शोरूम उद्घाटन गर्न हेलिकोप्टर चढेर ओखलढुंगामा
दमक रनको आयोजनामा दमकमा मिनी म्याराथुन सम्पन्न
सप्तरंगी एफ एम १०१.६ मेगाहर्ज
झापाको पुरानो सैनिक बजारको इतिहास र पहिचानलाई चिनाउन शुक्रबारदेखि सैनिक महोत्सव सुरु
‘एउटीलाई मुटुमा घर…’ को कभर भिडियो कम्पिटिसन हुने
चलचित्र ‘सयकडा दश’ यहि माघ १८ गते बाट देशभरका हलहरुमा प्रदर्शनमा आउने
Home / अन्तर्वार्ता / बिज्ञानको अधिकतम प्रयोगले मानिशलाई शारिरिक रुपमा कमजोर बनाउँदै लगेकाले आयुर्वेद र योगमा आकर्षण बढ्यो : गंगा ढकाल
बिज्ञानको अधिकतम प्रयोगले मानिशलाई शारिरिक रुपमा कमजोर बनाउँदै लगेकाले आयुर्वेद र योगमा आकर्षण बढ्यो : गंगा ढकाल
बितग १५ बर्ष देखी योगको क्षेत्रमा लाग्नु भएका बरिष्ठ योग प्रशिक्षक तथा अयुर्वेदिक चिकित्सक गंगा ढकाल संग गरिएको कुराकानी ।
स्वागत छ यहाँलाई ।
भर्खरै लामो समय जति अमेरीका घुमघाम भयो नी के को शिलशिलामा थियो यो भ्रमण ?
हजुर हो म झण्डै दुई महिना बिस बाईस दिन जति अमेरीका घुमेर भर्खरै आएको छु । मेरो अहिले अमेरीकाको मल्टिपल भिषा लागेको छ । बिभिन्न समयमा उता गई रहन्छु । यस पाली भने रोटरीको ईन्टरनेष्नल कन्भेन्सन क्यानाडामा थियो । यसै सन्दर्भमा उता बाट आउँदा मेरो व्यक्तिगत कामले केहिदिनको लागी मात्रै भनेर अमेरीका गएको तर त्यहाँ गए पछि मेरा सुभचिन्तकहरुले बिभिन्न कार्यक्रमहरुको आयोजना गर्नु भयो लामै भयो बसाई ।
अमेरीकामा रहँदा कहाँ कहाँ कस्ता कस्ता कार्यक्रम रहे त ?
खासगरी म अमेरीका बाट क्यानाडा फर्कनु को कारण मैले गत बर्ष अमेरीका जाँदा हर्वल उत्पादनको सम्भावना कत्तिको छ भन्ने बिषयमा थोरै अध्ययन गरेको थिएँ । त्यसमा सकारात्मक लक्षण देखिएको थियो । पोहोर समय थोरै भएकोले यस पाली अलि समय दिएर त्यस बिषयमा अध्ययन गरौं भन्ने लागेर गएको थिएँ । त्यसै शिलशिलामा अमेरीकामा नेपाली साथै एसियन देशबाट गएर व्यवसाय सञ्चाल गरिरहेका व्यक्तिहरुकोमा पुगेँ । तर यति लामो गरी बसिएला भन्ने त लागेको थिएन तर बस्दै जाँदा कार्यक्रमहरु लम्बिँदैगए । म पुगेको थाहा पाएपछि मेरा सुभचिन्तकहरुले बिभिन्न ठाउँमा कर्याक्रमहरु राख्नु भयो सबै ठाउँमा भ्याएर आउँदा केहि समय लाग्यो । त्यहाँ रहँदा धेरै कार्यक्रमहरुमा सहभागि भईयो ।
अमेरिकामा यो हर्बल प्रोडक्ट र योग प्रति मानिशको आकर्षण कत्तिको पाउनु भयो त ?
एकदमै धेरै । यो कस्तो हुँदो रहेछ भने मानिशले बिज्ञानको चरम उपभोग गरिसकेपछि र भौतिक सुख सुबिधाको अधिकतम यपभोग गर्दा पनि सुखको अनुभुती गर्न सकेन । मानिशलाई मानशिक सुख छैन । आत्मिक सुख पनि पाएको छैन । र पछिल्लो समय त शारिरिक सुख पनि कम हुँदै गएको छ । बिज्ञानको अधिकतम प्रयोगले मानिशलाई शारिरिक रुपमा पनि कमजोर बनाउँदै लगेको छ । यस पछि मानिशले यसको कारण खोज्दा शारिरिक व्यायाम नभएको कारणले, मानशिक व्यायाम नभएको कारणले, बैज्ञानिक उपकरणको साईड ईफेक्टको कारणले यो समस्या भएको पाईए पछि अहिले विश्कै मानिशहरु प्राकृतिक चिकित्सा, योग, हर्बल तर्पm आकर्षित भएको पाईएको छ । अहिले मानिशहरु आफ्नो स्वास्थ्य समस्याका कारण अत्यन्तै सचेत हुन थालेको छ त्यसैले अमेरीकामा मात्रै नभएर जुनसुकै मुलुकमा पनि मानिशको अकर्षण यस तर्पm भएको पाईएको छ ।
अहिले एसिया देशका मानिशहरु पश्चिमा देशमा बढेकाले योगा र हर्बल प्रोडक्टमा मानिशहरुको आकर्षण बढेको हो की ? पश्चिमाहरुमै पनि यस प्रति आकर्षण बढेको छ ?
म बिषेश गरी अमेरीकामा धेरै बसेकोले अन्य मुलुकको भन्दा अमेरीकाकै बिषयमा अलि धेरै थाहा भएकोले र त्यसैको आधारमा भन्दा एसियाली देशका मानिशरुले यो बिषय लिएर त्यहाँ पुगेका चाहिँ हुन । तर अहिले पश्चिमा मुलुकका मानिशहरु पनि नियमित रुपमा योग अभ्यासमा लागेका छन् । मानिशहरु अहिले आफ्नो स्वास्थ्यमा अत्यन्तै सचेत भएका छन् । अझ हामिले पिज्जा, बर्गर जस्ता चिजमा आकर्षित भए पनि पश्चिमाहरु भने अहिले ढिँडो, फापर, रोटी तर्पm आकर्षित भएका छन् । उनिहरु हामिले जस्तो अरुले खाएको देखेर खाने भन्दा पनि रिसर्च गरेर स्वास्थ्यमा फाईदा छ छैन सोच बिचार गरेर मात्रै प्रयोग गर्छन । त्यसैले हाम्रा खान पिन, हाम्रो योग व्यायामलाई उनिहरुले स्वास्थ्यको लागी फाईदा जनक देखेकोले अहिले पश्चिमा हरु पनि यसलाई अवलम्बन गरिरहेका छन् ।
तपाईंले अमेरिकामा बिभिन्न ठाउँमा कार्यक्रम गर्दा अमेरिकनहरुको चाहिँ कत्तिको सहभागिता रहन्थ्यो ?
एकदमै धेरै म जुन जुन ठाउँमा पुगें लगभग २५ ठाउँमा जति औपचारिक संघ संस्थाको आयोजनामा कार्यक्रम भयो भने अन्य अनौपचारीक धेरै कार्यक्रम भए सबै ठाउँमा त्यहिँका रैथानेहरुको पनि सहभागिता रह्यो । कोलम्बसमा त यस्तो भयो की त्यहाँको एउटा चर्चको पाष्टरनै कार्यक्रममा सहभागिताको लागी आउनु भएको थियो । उहाँका श्रीमान श्रीमतिनै कार्यक्रममा सहभागि बन्नु भयो । उहाँले मैले त यस अघि यो तपाईंहरुको धर्म होला भनेको त यो त सबैको स्वास्थ्यको लागी पो रहेछ भन्नु भयो । त्यस पछि म बसेको घरमै आएर पनि योगको बिषयमा अझ धेरै कुरा गर्नु भयो । त्यसैले सबै पक्षका मानिशहरुको सहभागिता रहन्थ्यो ।
योगा र आयुर्वेदले कुन कुन प्रकारका रोगहरुको उपचार गर्छ ?
यसले सबै प्रकारका रोगको उपचार गर्छ । उपचार दुई प्रकारका हुन्छन् । एउटा सिम्टमेटिक उपचार पद्धति हुन्छ र अर्को चाहिँ सिष्टमेटिक उपचार पद्धति हुन्छ । हामि चाहिँ सिष्टमेटिक पद्धति बाट उपचार गर्छौं । तर एक्सिडेन्टल, ईमर्जेन्सि केश बाहेक सबैलाई यसले उपचार गर्छ ।
यो आयुर्वेद अथवा योगा चाहिँ रोग लाग्नै नदिनु हो वा रोग लागेपछि उपचार गर्नु हो ?
दुवै हो । पहिलो कुरा त रोग लाग्नै नदिनु हो । योगा ग¥यो भने रोग लाग्ने सम्भावनानै कम हुन्छ । हाम्रो शरिर फिट र स्वस्थ रहन्छ । त्यसपछि कुनै रोग लागिनै हाल्यो भने पनि योगा र आयुर्वेदको माध्यम बाट रोगको उपचार गर्न सकिन्छ कुनै साईड ईफेक्ट बिनानै । त्यसैले अहिले सम्मको सबै भन्दा उत्तम उपचार पद्धति भनेकै आयुर्वेद र योगा हो । तर जम्मै कुरा योग गरेरनै ठिक हुन्छ भनेर तपाईंले प्रयोग गर्दै आउनु भएको औषधि फालेर आउनु भन्दिन । र त्यसो गर्नु पनि हुँदैन । तपाईं कुनै रोग लागेर उपचार गराईरहनु भएको छ भने औषधि सेवन गर्दै योगमा आउनु होस बिस्तारै तपाईंको औषधिको डोज घटाउन योगले मद्धत गर्ने छ । तर तपाईंले योग सुरु गरिहालें अब सबै ठिक हुन्छ भनेर लिँदै गरेको औषधि छाड्नु भयो भने खतरा हुन सक्छ । बिस्तारै तपाईंका औषधिको मात्रा घटाउने औपाधिको पावर घटाउने भने योग बाट हुन्छ ।
Previous: तेह्रथुमको बसन्तपुरमा आगलागी ,डेढ करोड बढीको क्षति, तीन घर नष्ट
Next: ४ सय जेष्ठ भूटानीलाई ज्याकेट वितरण
काठमाण्डाैको कीर्तिपुर केन्द्रविन्दु भएर ४ रेक्टर स्केलको शक्तिशाली भूकम्पको झड्का महशुस
६ महिनाको अवधिमा झापामा साढे ६ सय बढी पक्राउ
प्रदेश एक सरकारको “एनिभर्सरी”,बहुमत २ तिहाई उपलब्धि शुन्य
माइलि दिदिको मृत्यु
मेरो विश्वासमा अन्तिमसम्म अडिग रहने छु [ प्रतीक प्रधान @baahrakhari.com ]
बोली र व्यवहार सम्हाल्न नजान्दा मन्त्री पद गुमाउने नेताहरु
सरकार, छोरीहरूको आत्मसम्मानमा आगो नलगाऊ !
डा. केसी मरे भने…
दमक नगरपालीकाको शिक्षा नियमावली २०७४ र नगरपालीकाको उल्टो बाटो
खगेन्द्र संग्रौलाको कडा टिप्पणी : ‘ओली हेर्दा ज्ञानेन्द्रको झल्को, वादल हेर्दा कमल थापाको’
© २०७५ सर्वाधिकार सुरक्षित, सप्तरंगी एफ एम प्रा. लि.
सप्तरंगी एफएम /३ फागुन २०७५ बिर्तामोड,/ बिर्तामोड नगरपालिका वडा नम्बर १० मा रहेको झापाको पुरानो ...
ताप्लेजुङमा ४.६ रेक्टरस्केलको भुकम्प
सप्तरङ्गी एफएम दमक /३ फागुन २०७५ ताप्लेजुङ / ताप्लेजुङको कन्चनजङ्घा आसपास केन्द्रबिन्दु भएर हिजो ४.६ ...
भारतको जम्बु काश्मिरमा भीषण आतंकबादी हमला
सप्तरङ्गी एफएम / २ फागुन २०७५ ्भरतको जम्मू–कश्मीर राज्यको पुलावामा जिल्ला भएको ठूलो आतंकवादी आक्रमणमा ...
दमक ८ मा रहेको पूर्वाञ्चल मन्टेश्वरी स्कुलको आठौँ बार्षिकोत्सव सम्पन्न
सप्तरङ्गी एफ.एम. दमक फागुन दमक ८ मा रहेको पूर्वाञ्चल मन्टेश्वरी स्कुलले बिहिबार आफ्नो आठौ बार्षिकोत्सव ...
दमक १० सेतुमारीस्थित दुर्गा पाञ्चायन मन्दिरको सामुदायिक भवन शिलान्यास
सप्तरङ्गी एफ.एम. दमक/ २ फागुन २०७५ दमक १० सेतुमारीस्थित दुर्गा पाञ्चायन मन्दिरमा सामुदायिक भवन शिलान्यास ...